आईतबार, मंसिर १४, २०७७ ११:०३:४१ युनिकोड
धादिङ जिल्लाको समग्र शान्ति,सुरक्षा,कोरोना बिरुद्ध कार्यालयबाट भएका गतिबिधि तथा गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को समिक्षा लगाएतका बिषयमा नीलकण्ठ संवादमा पत्रकार रामकुमार थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरिक्षक(एसपी) रविन्द्र रेग्मिसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
धादिङ,०९ साउन ।
१.कसरी विताउनु भयो अहिले सम्मको लकडाउन अवधि ?
लकडाउनमा मुख्यतया हाम्रो चालु कार्यालय बाट आएको निर्देशनको अक्षय कोष कार्यन्वयन र स्थानीय निकाय प्रशासन लगाएत सुरक्षा निकाय सँग समन्वय गरेर सफल हुने हिसावले स्थानीय निकायको अग्रसरतामा यसको राम्रो व्यवस्थापन गरेका थियौं ।
२.यस्तो अदृश्य लडाँईमा लाग्दा कस्तो सिकाई हुने रहेछ र कस्तो अनुभव हुने रहेछ ?
कोभिड–१९ सहिएको अवस्था त छैन । यसको अनुभवमा के भन्दा कतिपय अवस्थामा हामीले सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाईनमा बस्ने हिसावले साईकोलोजिकल हिसावले पनि काउन्सेलिङ गर्नुपर्ने ।
हाम्रो समाज केहि शिक्षित छन् त केहि अशिक्षित छन् । उहाँहरुलाई स्वास्थ्यकर्मीहरु सँग लिनुपर्ने जुन सेवाहरु छ त्यसको विषयमा सचेत गराउनुपर्ने । अर्को कुरा सोसियल मिडियाहरुसँग आवद्ध भएर कोभिड–१९ बाट सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता गाउँ गाउँमा पनि जानकारी भएको थाहा पाईयो ।
३.लकडाउनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नको लागि प्रहरीहरुको मनोवल उच्च बनाउन के–कस्तो सेवा सुविधाहरु दिएको थियो ?
लकडाउन निरन्तर चलिरहेको छ । पार्टसियलको मोडालिटि मात्रै केहि परिवर्तन गरिएको छ अहिले । सय प्रतिशत कार्यन्वयन हुनु भनेको कुरा समाजका मानिसहरुमा मेरो पनि जिम्मेवारी हो है भन्ने मानसिकता भएको समाज भईदियो भने सय प्रतिशत कार्यन्वयन गर्ने सोचेका थियौं ।
प्रहरी कर्मचारीहरुको कुराहरुमा चालु कार्यालयबाट पनि विभिन्न यो गर यो नगर काउन्सिलको काम गर त्यसको व्यवस्थापनको कुरामा अहिले र पछि आउन सक्ने माहामारीको समयमा पनि हामीले निरन्तर खटेर काम गरि रहने छौं । फ्रन्टमा प्रहरीहरुलाई चाहिने पिपीई सेनिटाईजर मास्कहरु पनि पाईहरहेका छौं र सबै ठाउँहरुबाट बजेट पनि आईरहेको छ अहिले त्यस्तो समस्या भएको अवस्था छैन । सुरुको दिनहरुमा केहि अन्यौलता छाएको थियो तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अहिले सहज रुपमा काम भईरहेको छ ।
४.यहाँ धादिङ आउनु अगाडी कसरी नियाल्नु भएको थियो धादिङलाई ?
केन्द्रिय राजधानी बाट जोडिएको जिल्ला हो । धेरै मानिसहरुको वसोवास भएको र धेरैको आवात जावत गर्ने ठाउँ भएकोले एउटा अवसर पनि भयो । थ्रेटको रुपमा ८६ किलोमिटर रहेको लामो राजमार्गमा अवैध गाँजाको ओसारपोसार यो हाम्रो लागि थ्रेट भयो । त्यस्तै उत्तरी क्षेत्रको दार्खा पनि हो ।
त्यस्तो त देखिएको छैन म आएपछि । एक दुईवटा घट्नाहरु घटेका छन् र ती सबै कानुनी दायरामा पनि आईसकेका छन् । अर्को कुरा राजनितिको पनि अलि जोखिम छ भन्ने सुनेको थिए तर मैले त्यस्तो केहि समस्या देखिन सबै बाट सहयोग पाएको अवस्था छ ।
५.पहिला पहिलाका प्रहरी प्रमुखहरु आँउदा धादिङमा काम गर्न अलि गाह्रो छ भनेर अनुभव शेयर गर्नुभएको थियो ?
जनप्रतिनिधीहरु जनताको जिवनस्तर उकास्ने व्यक्तिहरु हुन् । हाम्रो कतिपय कुराहरु बर्दिको कारणले गर्दा पनि हामी कहाँ नआएको पनि हुन सक्छ । त्यो जनप्रतिनिधी बाट आएको भन्दैमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । आउछ त्यो हाम्रो च्यानलनै त्यही हो । त्यसलाई मैले पनि मिल्दै नमिल्ने गरि भनेको होईन । त्यो कुराहरुलाई सकारात्मक लिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
६.हामीले सुरक्षा निकायहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ?
अहिलेको समय नै त्यस्तै हो । पुलिसले भनेको घट्ना हुनै नदिने घट्ना घटे पछि अनुसन्धान गर्ने भनेको रियाक्टिभ पुलिसले गर्ने हो । पुलिसको पहुँच, बाटोघाटोले संचार साधनको सुचनाले गर्दा त्यसमा सफल भएका छौ. । यी नै कारणले गर्दा पनि ग्रुपमा हुने अपराधहरु छन् धादिङमा मात्रै होईन ।
हाईवेमा ठाउँ ठाउँमा एकदम टाढाको दुरी भनेको ६ देखि ७ किलोमिटरको दुरीमा प्रहरी रहेका छन् । उत्तरी भेगमा प्रहरी पोष्ट राखेका छौँ । फुर्केखोलामा राखेका छौँ । त्यसले गर्दा पनि सुरक्षा बढेको छ । यो एउटा सुरक्षा छ भनेर प्रत्याभुति दिने हो । त्यस्तै दार्खाको किन्ताङ फेदीमा एउटा पहरी पोष्ट स्थापना गराएका छौँ ।
कोभिड १९ लाई मध्यनजर गरेर पनि हो र सुरक्षाको लागि पनि हो । किन्ताङ फेदीमा तीन वटा गाउँपालिकाको मानिसहरु आउदा यहाँ प्रहरी पोष्ट छ है भन्ने मानशिक रुपमा बसेको हुन्छ । त्यसले गर्दा समग्र जिल्लाको हेर्दा शान्ती सुरक्षा आज सम्म सन्तोष छौँ ।
७. धादिङमा प्रहरी चौकीका भवनहरुको अवस्था कस्तो छ ?
अब हामी आफ्नै भवनमा सर्ने छौं एउटा फुलखर्कमा अलि गाह्रो छ । फुलखर्कमा अब छिटै सर्ने छौँ । एउटा हाप्सेजोनको अस्थायी प्रहरी पोष्ट छ त्यहाँ त्यस्तो चुहिएको अवस्था छैन । घाम पानी हुरीबतास बाट असर गर्ने ठाउँ काँही पनि छैन । सक्तोषजनकनै रहेको छ ।
८.धादिङको हिसावले हेर्दा नदिजन्य पदार्थहरुको उत्खनन गरेको र पैठारि गरिएको भन्ने पनि पाईन्छ,यसको रोकथामको लागि तपाईको भुमिका के रहन्छ ?
यसमा हामी सक्रिय भएर लाग्नु त छदैँ छ । साथ साथै प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आदेश अनुसारनै काम गर्छौ । अहिले त्रिशुली र सहायकका नदीहरुबाट नदी जन्य चिजहरु चोरी पैठरी भएको छैन भन्ने कुरामा सय प्रतिशत नै आश्वासन दिन चाहन्छु । भोली केहि होला भन्ने कुरामा पनि हामी तयारी छौं । अहिलेको अवस्था सम्म यो कामको बारेमा त्यस्तो दवाब आएको छैन सबैको बाट सहयोग आएको छ ।
९.तपाईहरुले जसरी संयन्त्र बनाएर सबैसँग मिलेर अगाडी बढ्नु भएको छ नि यसको एउटा के सुचक छ भने धादिङमा आपराधिक घट्नाहरु कम हुदैं गएको छ,अब हामीलेसाउन देखि पछाडी त्यस्तो केहि नयाँ रणनिती ल्याएका छौं ?
कोभिड–१९ ले गर्दा धेरै मानिसहरु बेरोजगार बाट आफ्नो गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ । अब हाम्रो चाडपर्वहरु पनि आउदैं छ,त्यसले गर्दा पनि आपराधिक घट्नाहरु बढ्न सक्ला भनेर सचेत छौँ, त्यसलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने कुराको योजना पनि बनाईसकेका छौँ ।
१०.अहिलेको अवस्था हेर्दा झनै घट्नाहरु बढ्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ नि ?
अहिलेको रेकर्ड हेर्दा त्यो देखिन्छ । लकडाउन अवधिको रेकर्ड हेर्दा त्यो कमै देखिन्छ । चार्डपर्वको समयमा केहि घट्ला कि भन्ने बारेमा हामी सचेत छौँ।
११.वास्तवमा प्रहरी र नागरिक बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो ?
बच्चालाई पुलिस भनेर तर्साउने होईन कि पुलिस तिम्रो साथी हो भनेर चिनाउनुपर्छ । नागरिक सँगको सम्न्ध सुमधुर भएन भने हामीले काम गर्नै सक्दैनौं ।
१२.केहि व्यक्तिहरुको कारणले गर्दा केहि प्रहरीको वदनाम पनि भएको छ नि ?
पुलिस सँग डराउनुपर्ने कुरानै छैन,डर मान्ने त नेपाल सरकारले बनाएको कानुनसँग हो । पुलिसले पनि जनताले बनाएको कानुनलाई कार्यन्वयन गराउने हो । पुलिस बाट गल्ती हुदैन भन्ने कुरा छैन, भएका छन् । म मेरै कुरा गर्छु । कहिले काँही सबै कुरासँग सहकार्य भएन भने त्यसले गर्दा मिडियामा यस्ता कुराहरु आयो । हामी सहकार्यका साथ काम गरेको भए मिडियाहरु बाट आउने थिएन होला ।
१३.त्यो दिनको वास्तविक घट्ना के हो ?
खासमा के हो भन्दा मलाई उहाँको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन त्यसले गर्दा पनि यो सबै हुन पुग्यो ।अर्को कुरा हामी बीच कहिले पनि सहकार्य भएन पनि त्यसले गर्दा पनि अरु अनावश्यक विषयमा टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
१४.यो आर्थिक वर्षमा भएका सडक दुर्घटनाहरु लगाएतका घटनाहरुको समिक्षा भयो ?
मैले त्यसको तथ्याङक पनि ल्याईन । कोभिड–१९ ले गर्दा पनि होला सडक दुर्घटनाहरु कम भएका छन् । घरेलु हिंसा पनि कमनै आएको छ । पहिला जस्तो घट्नाहरु लुकाएर गाउँमा मिलाउने अवस्था छैन । प्राय जसो व्यक्तिरु सामाजिक संजालमा जोडिएको हुनाले पनि थाहा भईहाल्छ ।
१५.यदि आफुमा घट्ना भयो या गाउँ घरमा घट्ना घट्यो भने कसरी उजुरी दिन सक्छन् ?
केहि पनि गर्नुपर्दैन । सिधैं १ सय मा फोन गरेर भन्न सकिन्छ । तर कहिले काँही सिमानाको कारणले गर्दा धादिङ प्रहरीमा फोन नआउन सक्छ त्यो समयमा जहाँ फोन लागेको छ,त्यही धादिङ प्रहरीमा खबर गर्न लगाउनु पर्छ । कतिपय घरेलु हिंसाहरु लुकाएर राखेको अवस्था पनि हुन्छ ।
१६ धादिङमा कस्तो काम गर्न सकियो भने शान्ती सुरक्षा आँउछ ?
प्रहरी मात्रै होईन सबै मिलेर घरेलु मदिरा रोक्न सक्यौँ भने धेरै अपराधहरु कम हुन्छ । कतिपय घट्नाहरु रक्सिकै कारणले घट्ने गरेका छन् । परम्परागत रुपमा कतिपयले प्रयोग पनि गर्ने गर्छन् तर त्यसलाई पनि कानुनले मान्दैन ।
१७. अन्त्यमा रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पुर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले कोभिड–१९ को कारणले गर्दा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम तपाईहरुको समुदायमा आएर गर्न पाएका छैनौँ । कोभिड–१९ को रोकथाममा सबैको सहयोग पाइर्रहेका छौँ । साथै पुलिस हाम्रो साथी हो भन्ने कुरा नर्विसौं । केहि समस्या परेमा १०० मा फोन गरेर हामीलाई खबर गर्नुहोला । अन्त्यमा मेरा केहि कुराहरु राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि नीलकण्ठ एफ.एम होल टिमलाई धेरै–धेरै धन्यावाद ।